बक्स अफिसमा सुपरफ्लप भएको शाहरुखको जिरो फिल्म किन अचानक टप ट्रेन्डमा ? | Ratopati
बक्स अफिसमा सुपरफ्लप भएको शाहरुखको जिरो फिल्म किन अचानक टप ट्रेन्डमा ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २९, २०७६ chat_bubble_outline0
बलिउडका किंग खानका नामबाट चर्चित शाहरुख खानको गत वर्ष रिलिज भएको जिरोको ट्रेलर आज बारम्बार हेरिँदैछ । बक्स अफिसमा सुपरफ्लप भएको यो फिल्मकोे आज भारतीय सोसल मिडियामा अत्यधिक चर्चा भइरहेको छ । तर यो ट्रेन्डमा आउनुको कारण निकै रोचक छ ।
जिरोको ट्रेलर शाहरुख खानको एउटा ट्वीटपछि ट्रेन्डमा आएको हो । यो ट्वीटमा शाहरुख खानले आफ्नो ३९ मिलियन फलोअर्स भएको अवसरमा प्रशंसकलाई धन्यवाद दिएका छन् । हेर्नुहोस्, यो ट्वीटः
स्मरण रहोस्, शाहरुख खानको ३९ मिलियन फलोअर्स भएपछि उनले फलोअर्सको मामलामा अमिताभ बच्चनलाई पनि पछि पारेका छन् । शाहरुखका प्रशंसकले उनलाई यो उपलब्धिका लागि बधाई पनि दिइरहेका छन् ।
स्मरण रहोस्, जिरो फिल्म त फ्लप भयो तर फिल्मको ट्रेलर युट्युबमा सुपरहिट छ । यो ट्रेलरलाई अहिलेसम्म १२ करोड ५१ लाख बढी पटक हेरिएको छ ।
#sharukh khan#zero#trailer#top trend
मीराको खुसी जीवनको रहस्य हुन् शाहिदः विवाहको पाँचौ वर्षगाँठमा भनिन्,‘याद राख, श्रीमती सधैं सही हुन्छिन्’
सुशान्तको मृत्युपछि निरन्तरको घृणायुक्त कमेन्टले तनावमा अंकिता लोखेन्डका प्रेमी विकी, सोसल मिडियामा गरे यस्तो
सुशान्त सिंह अभिनित ‘दिल बेचारा’ को ट्रेलरले तोड्यो ‘एभेन्जर्स इन्फिनिटी वार’ को कीर्तिमान
सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्याले लियो नयाँ मोड, बिहार कोर्टको यस्तो फैसला